I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Orit
Ifulethi lonke elingu-2BR (950 sqft) NGELAKHO LONKE, elisendaweni ephephile futhi ehamba kalula (78 walk score ☺) 20 min ukuya eManhattan.
✔ Ibhasi likuyisa ngqo e-NYC ngemizuzu engama-20.
✔ I-shuttle yamahhala eya Esikebheni - amaminithi angu-9 ukuya e-NYC.
✔ Indawo yokupaka yangasese
✔ I-WiFi YAMAHHALA Esheshayo nekhebula le-TV/Amazon Stick
✔ imizuzu engama-25 ukusuka esikhumulweni sezindiza saseNewark - EWR
✔ Imibhede ethokomele namathawula athambile
✔ Iwasha nesomisi egumbini elingaphansi
✔ Isingatha ngokunethezeka izivakashi ezingu-5-6
✔ Osokhaya ongathembela kubo
Siyakwamukela efulethini lethu elinelanga eli-2 BD/1 elicwilisa ilanga efasiteleni lethu elikhulu legumbi lokuhlala futhi likuqalisa ngevayibhu ehamba phambili ekuseni yosuku olugcwele ukuzijabulisa e-Manhattan. Ilungele imindeni, izithandani, nabahambi bebhizinisi.
☟Amaphuzu avelele efulethini☟
✦ Indawo yokupaka YAMAHHALA neyimfihlo yokupaka imoto yakho ngesikhathi sokuhlala kwakho.
✦ Ukufinyelela kwekhodi yokungena endlini (akukho khiye odingekayo).
✦ I-SuperFast Verison FIOS YAMAHHALA ye-WiFi nekhebula le-TV.
✦ Isistimu yokushisisa emaphakathi kanye namayunithi e-Window Air conditioning.
✦ Omatilasi abaphezulu bomugqa bokulala ubusuku obuhle ngemva kosuku olude e-NYC.
✦ Ipulani laphansi elivulekile uzothanda ukuhlala kulo. Ikhishi elihlome ngokuphelele kanye nendawo yokudlela.
✦ Ekhishini: umshini wokugeza izitsha, i-microwave, umshini wekhofi negedlela likagesi.
✦ Iwasha nokomisa esakhiweni ($1.75 ngomthwalo ngamunye)
✦ Ifulethi litholakala esitezi sokuqala. Indiza eyodwa yezitezi (9 izinyathelo)
✦ Bona izithombe zohlu.
☟Yini ekulindele efulethini☟
✦ Ukunikezwa kwesiqalisi samahhala:
✔ 2 amathawula okugeza athambile isivakashi ngasinye kanye namathawula esandla
✔ Ukugeza umzimba, i-Shampoo, i-conditioner
✔ Ilineni elisha emibhedeni yethu ethokomele
✔ Iphepha lasendlini yangasese, amathawula ephepha
✔ Amathiphu namabhola kakotini
✔ Ibhodi lensimbi nensimbi
✔ Isomisi esishisayo
✔ Ama-earplugs nedivayisi yomsindo omhlophe yezindawo zokulala ezikhanyayo
(Inothi elibalulekile ☞ ASINIKEZI ngokunikezwa okungenamkhawulo, KUPHELA ikhithi yokuqala)
☟ Amaphuzu avelele ezokuthutha ☟
✦ Gxumela ebhasini #158, ima phambi kwebhilidi lethu futhi lithatha amaminithi angu-20 ukuya eManhattan($3.50 ngohambo ngalunye) NOMA amathikithi ayi-10 ukuze uthole isaphulelo. Ibhasi lokugcina lisuka eManhattan ngo-1:30 AM.
✦ Thatha Isikebhe esiya e-Manhattan, kuthatha amaminithi angu-9 ukuwela umfula i-Hudson ($9 ngohambo ngalunye).
✦ Kunebhasi laMAHHALA eliya eSikhunjini (ekuseni kuphela).
✦ Isikhumulo sezindiza saseNewark (EWR) siqhele ngamaminithi angu-25-30 cishe. $30 Ukugibela kwe-Uber.
✦ I-JFK/LGA Airports iqhele ngamaminithi angu-40-50 cishe. $80-90 Ukugibela kwe-Uber.
☟ Izithombe ezinhle kakhulu zendawo ☟
✦ I-ACME 24/7 Isuphamakethe (imizuzu eyi-15 yokuhamba), iTrader Joe's (5 min drive), imakethe ye-WholeFoods (8 min drive), imakethe yaseJapan yaseMitsuah (5 min drive).
✦ Indawo yezitolo yangaphandle enezitolo nezindawo zokudlela
✦ Indawo yokudlela yase-Porto - I-Pizza ye-Neapolitan ehamba phambili
✦ Ibha yezemidlalo ye-Pier 115/indawo yokudlela ebheke phezulu kwe-Manhattan
✦ I-Sojo Spa imizuzu emi-5 ukushayela
4.86 ·249 okushiwo abanye
4.86 · 249 okushiwo abanye
Lokhu kungase kukumangaze kodwa le ngxenye ye-NJ iseduze neMidtown Manhattan, Times square, Theatre district, Madison Square Garden, Grand Central, Empire state Building, Saint Patrick's Cathedral and Rockefeller Center kunokuhlala kwezinye izingxenye zeManhattan ephansi nangaphezulu ngokwayo. Siseduze kakhulu kunazo zonke izingxenye zeBrooklyn futhi siseduze kakhulu kunokuhlala eQueens noma eBronx.
Indawo yokuhlala kanokusho yase-Edgewater esemfuleni i-Hudson, qiniseka ukuthi uyahamba uye emfuleni ukuze uthathe izithombe ze-Manhattan skyline. Ingenye yezindawo ezimbalwa ezikwazi ukuhamba kalula e-NJ.
Isitolo esikhulu esiseduzane - ACME (12 min walk) 481 River Rd, Edgewater, NJ 07020 Mane wenze kwesokunxele emgwaqeni omkhulu, River Rd futhi uqhubeke uze ubone iplaza kwesokudla sakho.
Indawo yemakethe yaseMitsuwa (3 min drive) 595 River Rd, Edgewater, NJ 07020
I-Trader Joe's (5 min drive) 715 River Rd, Edgewater, NJ 07020
I-Whole Foods Market (5 min drive) 905 River Rd, Edgewater, NJ 07020
Ibanga lokuhamba uzungeza ibhulokhi:
Amagama ebhrendi esikhungo sezitolo seCity Place: Anthropology, Banana republic, Guess,
Imfihlo kaVictoria, i-Ambiance Boutique,
Izindawo zokudlela : (ukubala ezimbalwa nje)
Ukudla kwasekuseni - isinkwa sePanera, ama-Dunkin' donuts
Ibhulantshi - Water Front
Isidlo sasemini - i-Greek Taverna, i-Bareburger (i-Organic), i-Chipotle Mexican Grill, i-Five Guys, i-grill yase-Moe eseningizimu-ntshonalanga, isitolo sika-ayisikhilimu sase-Haagen-Dazs.
Isidlo sakusihlwa/ Ibha/ Indawo yokuphumula - emanzini - Pier 115, Porto (isiNtaliyane)
Indawo yokudlela ne-bar, Haven River Front, Sabor Latin Bistro.
Isitolo esikahle se-CVS kanye nekhemisi, I-Vithamini Shoppe
Ibanga lokushayela elizungeza indawo:
I-Uber, i-Lyft, itekisi noma ugibele ngokushesha amaminithi angu-5 ngebhasi uye e-Starbucks, Target, Trader Joe's, Whole foods market, kanye nemakethe ye-Mitsuwa (imakethe yokudla yase-Asia) kokuningi kwakho ungadlela futhi ukhethe ekudleni okumnandi nokuhlukahlukene.
Ngaphezu kwayo yonke indawo inesipiliyoni sokudlela esimangalisayo esihlanganisa i-Sushi cruise kanye ne-Archetypus Cafe edumile (ingaphakathi lemigede).
Ezinye zezindawo zokudlela ezisendaweni yi-BYOB = Letha Ibhodlela Lakho Elakho noma i-Buzz :) ukuze ukwazi ukuhlela kusenesikhathi futhi uthole okuthandayo.
✦ Siyazithanda izihambeli zethu (WENA), siyakuthanda esikwenzayo futhi siyakwazisa ukusikhetha njengababungazi bakho. Sizokwenza konke okusemandleni ethu ukwenza ukuhlala kwakho kube ntofontofo, kujabulise futhi kukhumbuleke.
✦ Sihlala sixhumeka kunoma yini oyidingayo, sicela usebenzise uhlelo lokusebenza lwe-Airbnb kunoma yimiphi imilayezo ukuze uthole ukulethwa okuqinisekisiwe kithi. Uma ungakakwenzi lokho, sicela ulande uhlelo lokusebenza lwe-Airbnb.
✦ Kubasebenzisi abasha be-Airbnb, siyakwamukela ezakamuva ngezinketho zokuhlala onazo! Njengababungazi be-Airbnb, sithembela kakhulu ekuxhumaneni ngokuphathelene nezikhathi zokungena/zokuphuma njll, njengoba singenayo indawo yokwamukela esemthethweni oyoyithola ehhotela.
✦ Siyazithanda izihambeli zethu (WENA), siyakuthanda esikwenzayo futhi siyakwazisa ukusikhetha njengababungazi bakho. Sizokwenza konke okusemandleni ethu ukwenza ukuhlala kwakho ku…
UOrit Ungumbungazi ovelele